Goobaha Barta Casriga ee Barta - Barta Casriga ee Online Online
Casino Online Xeerarka Bonus > Goobaha Barta Casriga ee Barta
Belgium waxay leedahay taariikh aad u tayo badan oo ka mid ah soo kabashada iyo horumarinta khamaarka. Taariikhyahanadu waxay halkan ka heleen dukumiinti ugu horeysay ee kaararka ciyaaraha ee Yurub, oo taariikhda ku soo laabtay 1300 maa sano, iyo qarnigii shan iyo tobnaad ee Belgium uu qabtay bakhtiyaanasiibka ugu horreeya.
Laga soo bilaabo 1999, ganacsiga qamaarka ee Belgium waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay sharci, waa sanadkaan May May 7 waxaa lagu ansixiyey sharci sharci ah oo ku saabsan khamaarka ciyaaraha dalka. Sannadaha soo socda sharciyada waxaa la soo dejiyey waxoogaa isbeddel ah, laakiin wuxuu weli yahay aasaaska sharciga ee khamaarka ee Belgium. Maanta waxay maamushaa hawlaha qamaarka ah ee Qamaarista Khamaarista, oo lagu aasaasay 1999. Hay'adan ayaa ka shaqeyneysa ruqsadda, iyo sidoo kale inay xakamayso howlaha garsoorka iyo ilaalinta xuquuqda ciyaartoyda.
Macluumaadka loogu talagalay dadka soo booqda liiskayaga khamaarka internetka, Belgium waxaa jira mamnuucida booqashada dadka xawaaladaha ku jira sanadaha 21, iyo sidoo kale xubnaha garsoorka iyo booliska. Ugu dambeyntii waxay booqan karaan xarumaha khamaarka oo keliya marka ay dhacdo in ay fuliyaan waajibaadkooda.
Sida waafaqsan sharciga khamaarka internetka ee Belgium, si shirkaddu u adeegto khamaarka internetka ee dalka, waa inay sidoo kale noqotaa xal loogu talagalay xarumaha khamaarka ee degaanka. Guddiga Khamaarista Khamaarista ayaa si dhow ula soconaya hirgelinta sharciga waxayna si joogto ah uga dhigtaa liisaska madow ee goobaha caalamiga ah ee khamaarka internetka ee Belgium, oo ka shaqeynaya waddanka si sharcidarro ah. Ku xadgudubka sharciyeyaashu waxay la kulmaan ganaaxyo, qaddarka ay gaari karaan ilaa 100 kun euro.
Socodkayagu wuu socdaa, iyo sida waddanku yahay CasinoToplists Gothic qalcado, waraaqo qurux badan iyo shukulaato - Belgium. Aan aragno waxyaabaha xiisaha leh ee sugaya dalxiisayaasha iyo khamaarayaasha dalka.
Belgium - Waxyaabo kooban oo ku saabsan taariikhda iyo juquraafi ahaan;
Bilowgii xilligeennii kuyaalkii hadda ee maanta Qabiilka Belgiska ee ku noolaa, wuxuu lahaa asal ahaan Celtic. Waxay ka timaadaa qabiilka waxayna ka dhalataa magaca waddanka.
Waqtigaas, Belgium wuxuu ahaa qayb ka mid ah Boqortooyada Burgundi, Rome, Spain , wuxuu ka mid ahaa Nederland iyo xataa Faransiis.
Xilliga go'aansan ee dalka wuxuu ahaa kacaankii Belgian ee Sebtembar 23, 1830 - Belgium wuxuu ku dhawaaqay boqortooyo madaxbannaan, halka hoggaanku uu noqonayo King Leopold I. Dhibaatada Belgiumka ayaa aad u soo martay intii I iyo Dagaalkii Dunida II - kuwo badan oo ka mid ah magaalada ayaa ku dhowaadba burburay, laakiin oo ku saabsan hoos u dhaca dhaqaalaha oo odhan maya xisaabo.
Hadda nidaamka siyaasadeed ee Beljimka waa boqortooyo dastuuri ah oo dastuuri ah. On 21 / 07 / 2013, dalka waxaa xukuma King Philip. Wadanku wuxuu u qaybsan yahay gobollada 3 (Flemish, Walloon iyo Brussels-Capital), oo ah 2 ugu horeysay oo u qaybsan gobollada iyo wax ka badan.
Sannad kiilo ee shirkadaha khamaarka ee Belgian waxay bilaabeen 1999 - waxay markaas ahayd in sharciyada iyo wax-ka-beddelka la ansixiyey, oo wali xakameynaya waxqabadyada casinooyinka iyo khamaarrada khamaarka. Tirada guud ee Belgium 9 casinos jira: 1 wuxuu ku yaalaa caasimadda - Brussels, 4 iyo casinos ee gobollada Flemish iyo Walloon ee Ostend, Namur, Spa, Knokke-Heist, IWM
Khamaar walba wuxuu ku shaqeeyaa shatiga oo uu leeyahay sanduuq dammaanad ah - taas oo ah, deebaajiga haddii wax waliba ay tagi karaan si ay ugu guuleystaan ​​lacag bixinta ama laysanka.
Ka soo qaybgalayaasha casinos waxay dadka kaliya oo gaarsiiyeen mudnaanta koobaad ee 21 (u baahan baasaboor). Bandhig walba wuxuu helayaa dhibcaha kaararka ee ciyaartoyda waana inuu ku kaydiyaa xogta sanadaha 10. Guryaha qamaarka iyo qamaarka lama siin karo wakiillada garsoorka, garsoorka, norwadaha iyo booliska. Marka laga reebo, dabcan, dadkani waxay fuliyaan shaqadooda.
Sidoo kale talada casabiga ayaa laga yaabaa in la xiro marka la codsanayo takhtar, daryeel-bixiye, qof qaraabo ah oo la socda bixinta dukumentiyo ku haboon xaqiijinta ku-tiirsanaanta khamaarka ayaa doonaya inuu ciyaaro. Kaliya ciyaaryahanka ayaa codsan kara inuu xakameeyo helitaankaaga - waa inay soo sheegaan casino.
In caasimada qaranka - Brussels - casino ah «Grand Casino Brussels Viage» Waxa ay martigelineysaa SIT & GO ee Isniinta iyo Arbaca, iyagoo iibsanaya $ 60, cashuur-celis xayiraad ama 'Omaha' maalin walba ayaa lagu qabtaa tartanka ciyaaraha Poker oo lagu ciyaaro WPT (World Poker Tour) Casino wuxuu bixiyaa xulal badan oo kala duwan - Mashiinnada 375 oo leh qiime ka socota xariga 1 illaa 1 euro, blackjack , roulette , baccarat ., mahjong iyo Lacagta Lacagta Macaamiisha dalbaday waxaa ka jira hoolalka VIP- oo leh liis gaar ah oo sigaar ah iyo hargab tayo sare leh.
museum of biir ah (Belgische Brouwers). Cinwaanka: Xarunta weyn, 10. Halkan, dadka jecel beerta biirta ayaa arki kara bandhigga qarniga 18th, iyo sidoo kale wax badan oo ku saabsan boobka casriga ah ee la isticmaalayo farsamada casriga ah. Qalabka maktabadda waa midka € 5.
Madxafka "Autoworld" (Autoworld). Cinwaanka: Parc du Cinquantenaire, 11. Halkaan waxaa ku yaal hal saqaf, matxafku wuxuu ka kooban yahay noocyada baabuurta 400: midabada, cayaaraha, xiddigaha baabuurta, gaadiidka deegaanka, gaadiidka degmada iyo mootooyinka. Tikidka dadka waaweyn - € 9, carruurta (laga bilaabo 6 illaa 12 sano) - € 5, bilaash la'aan.
Astaanta calaamadda "Atomium". Cinwaanka: Avenue de l'Atomium, 1020. Marka xigta saldhiga meter Heizel. Taabashadani waa xaraf kareem ah oo ah birta birta ah, oo lagu kordhinayo biladaha 160. Heerka mitirka 102, miisaanka wuxuu ku saabsan yahay 2,400 tons. Dhismo aad u fiican!
"Park-mini-park" Goobta: meel u dhow dhismaha "Atomium". Baarku wuxuu ka kooban yahay meelaha ugu quruxda badan ee Europe, oo lagu sameeyay miisaan 1 ilaa 25. Guud ahaan, waxaa soo bandhigay magaalooyin 80 iyo walxaha 350. Inta badan caan ah, dabcan, Big Ben, Eiffel Tower iyo Tower Tower iyo jidadka Venetian.
Matxafka Comic. Cinwaanka : Xarunta Xarunta Jilibka ee Belian 20 Rue des Sables (Zandstraat). Taageerayaasha Comic waxay ku riyaaqi doonaan bandhiga muraayadda, oo ay ka mid yihiin 25,000 ka shaqeeyso inta badan "gadhsi" ilaa maanta. By habka, ku nool Belgium waa tirada ugu badan ee qorayaasha buugga comic.
Waxay u badan tahay in ay ka badan tahay 10 milyan - dad badan oo ajnabiya;
Wadanku wuxuu soo saaraa wax ka badan noocyada 800 ee biir ah, iyo sanadkiiba qof kasta oo ka mid ah wadankan ayaa cabba qiyaasaha 150. Kaliya halkan waxay soo saartaa 220,000 ton oo shukulaato ah - waa 22 kg qofkiiba. Masters of Belgium waxay la yimaadaan nooc "praline";
Dhalada yar ee biirta - 0.25 litir, iyo in ka badan - 0.33 litir, iyo dhalooyin mug leh oo miisaan ah oo ka mid ah 0.5 si adag u hel;
Flanders, waxay inta badan ku hadlaan Dutch-ka iyo Wallonia Faransiis. Xaaladdan oo kale, Flammadu waa kuwo aad u fiican;
Kalfadhiyeyaashu waa kuwo aad u daacad ah waxayna ku nool yihiin jadwal - booqasho buuxda ka dib markaan ku guuleysan inaad ku guuleysato;
Belgium - waa waddan hogaaminaya garsoorka geela;
Qaybta caanka ah ee "Manneken Pis" inta lagu jiro xafladaha iyo xafladaha ayaa la xirxiray, waxayna dhammaantood ka kooban yihiin 600;
Axadda, qofna halkan ma shaqeynayo - xitaa farmashiyaha;